ITOOBIYA OO SHEEGTAY IN DABAGAL LAGU SAMEYNAYO MADAXDA DAWLADA EE MUSUQA LAGU TUHMA | Deegaanka News
ADDIS ABABA – Ra’isulwasaare ku-xigeenka Itoobiya, Debretsion Gebremachael, ayaa sheegay in dawladu baadhis ku sameyneyso masuuliyiinta maalqabeenka u noqday si aan sharciga waafaqsaneyn.
Masuulka oo ka hadalyey fagaare lagu doodayey ayaa xusay in ay liidnimo tahay in aan weli wax laga qaban maamul-xumada dalka, balse waxa uu dhanka kale sheegay in ay xukuumada ka go’antahay in arrintaas xal loo helo.
Saraakiil badan oo dawlada ah ayaa in badan ku soo celceliyey in wax laga qabanayo maamul-ximida iyo musuqmaasuqa, balse dadweynaha ayaa aad u tiigsnayaa balanqaadyada dawlada iyada oo ilaa hadda aan shaag la rogin.
Dadweynaha ayaa dareensan in musaqa iyo maamlka xumi ku baahay dalka oo ay heer kasta ka muuqdaan.
R’isulwasaare ku-xigeenka ayaa ku nuuxnuuxsaday in talaabo laga qaadi shaksiyaadka ku caanbaxay nidaam-xumida.
Xukuumada EPRDF ayaa ilaa imika aan ku heshin nidaamka loo wajahayo xal u helida dareenka dadweynaha iyada oo la aaminsan yahay in taalabo kasta saameyn ku yeealan karto madax sarsare oo dawlada ku jirta.
Balaanqaadka masuulkan ayaa ku soo beegmay xilli ay dalka abaaro iyo kacadoon shacab oo ka socda gobolada dalka qaarkood hadheeyeen.